Tag: jbh | Martech Zone
Ny State of Social Media Marketing 2015
Asabotsy, Septambra 26, 2015 Douglas Karr
Izahay dia nizara vaovao momba ny mombamomba sy ny demografika isaky ny tambajotra sosialy malaza, saingy tsy manome fampahalalana betsaka momba ny fiovan'ny fitondran-tena sy ny fiantraikan'ny media sosialy izany. Finday, eCommerce, dokam-barotra an-tsehatra, fifandraisan'ny besinimaro ary na ny marketing amin'ny motera fikarohana aza dia voan'ny marketing ara-tsosialy. Ny tena izy dia… raha tsy varotra amin'ny media sosialy ny orinasanao dia very fotoana lehibe ianao. Raha ny marina, 33% amin'ireo mpivarotra no nanondro ny media sosialy ho a
Ny State of Search Marketing amin'ny 2015
Alatsinainy Aprily 20, 2015 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay aho dia niresaka tamin'ny vondrona iray izay nanasana ahy hiverina hiresaka mandritra ny 5 taona lasa. Tamin'ny fotoana iray tao amin'ny resaka dia nivadika ho fampiasana teny lakile ny lohahevitra. Nianjera ny valanoranom-bava rehefa noteneniko ny mpanatrika mba tsy hanahy intsony momba ny hakitroky ny teny lakile sy ny fampiasana azy ireo. Raha mbola mieritreritra aho fa ny teny lakile dia tsara ampiasaina amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra iray, amin'ny ankapobeny dia mino aho fa tsara kokoa ianao